WAR CUSUB: Neymar JR Oo Dib U Noolaynaya Hammiga Ay Real Madid Ka Qabtay & Ka Hadhistii PSG Ee Champions League Oo Saamayn Yeelanaysa - GOOL24.NET
WAR CUSUB: Neymar JR Oo Dib U Noolaynaya Hammiga Ay Real Madid Ka Qabtay & Ka Hadhistii PSG Ee Champions League Oo Saamayn Yeelanaysa
Hoggaamiyaha kooxda PSG ee Neymar JR ayaa u muuqda mid isagu dib u hurinaya xiiso kasta oo ay u qabtay kooxda ree Spain ee Real Madrid kaddib qalbi jab weyn oo uu ka qaaday ka hadhistoodii tartanka Champions League.
Sidii xilli ciyaareedkii horeba jirtay Neymar iyo kooxdiisa ayaan meesha ka saarin inay isbedel sameeyaan oo ay kala dhaqaaqi karaan waxaana haatan maalinba maalinta ka dambaysa sii xumaanaysa is fahankooda kooxda.
Sababtii uu Neymar uga tagay Barcelona ayaa ahayd inuu tartanka Champions League kusoo qaado koox kale balse kooxda ree France ayaan marnaba u muujin awood dheeri ah oo ay tartankan ku hanan karto balse waxa ay sanadihii ugu dambeeyayba ku hadhayeen wareega 16-ka.
Iyadoo ay sidaasi jirto ayay haddana Paris isku diyaarinaysaa inay heshiis cusub ka saxeexdaan xiddigan iyaga oo usoo bandhigi doona mushahar ka badan midkiisa haatan ee 36-ka Milyan ah.
Dhinaca kale Real oo dhawaan loo magacaabay tababaraheedii hore ee Zinadine Zidane ayaa la filayaa inay suuqa si baahsan u gasho isla markaana ay lacago weyn ku raadiyaan xiddigo hoggaan buuxa u noqda safka kooxda.
Madaxweynaha Los Blancos ee Florentino Perez ayaa qudhiisu isku dayi doona inuu mushahar badan usoo bandhigo waxaana uu miiska u saari doonaa 45 Milyan.